I-China Iifowuni zeTelecom zabavelisi kunye nabaxhasi-iChina Chaian
Ikhaya > Iimveliso > Inkqubo yeTelecom > Izixhobo zeTelecom
Izixhobo zeTelecom ezenziwe e-China zingathengwa kwi-Chaolian Electronic ngamaxabiso asezantsi. Umvelisi oqeqeshiweyo kunye nomzi mveliso weemveliso ezikumgangatho ophezulu eChina.
Ibha yoMhlaba yeeModyuli zePairi ezili-10
Le bar yomhlaba yeemodyuli ezili-10 iya kusetyenziswa kunye nemodyuli ye-10, ukuyenza ikhuseleke. Isetyenziswa ngokubanzi ezindlwini, kwiinkampani, kumaziko okufundisa nakwezinye iinkqubo zekhabhathi. Yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu kwaye inolwakhiwo olufanelekileyo.
Umnini welebheli weModyuli eyi-10 yePhuli
Le ileyibheli inezinto zeemodyuli eziyi-10 ezenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu, kwaye inolwakhiwo olulungileyo lokutshatisa imodyuli eyi-10. Isetyenziswa ngokubanzi ezindlwini, kwiinkampani, kwiindawo zokufundisa nakwezinye iinkqubo zekhabhathi.
Label Holder Kwisakhelo
Le ileyibheli yesakhelo yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu, kwaye inolwakhiwo olulungileyo lokutshatisa nezakhelo zentaba yangasemva. Isetyenziswa ngokubanzi ezindlwini, kwiinkampani, kwiindawo zokufundisa nakwezinye iinkqubo zekhabhathi.
Intambo yoVavanyo lwePole e-2 ngePlagi enye yoVavanyo kunye ne-RJ-45 Ubude bePlagi ye-1.5 yemitha
Le Cole 2 yoVavanyo lwePole ngoVavanyo lwePlagi enye kunye ne-RJ-45 Ubude bePlagi eyi-1.5 yemitha isetyenziswa ngokubanzi kumacandelo eenkqubo zokufaka iikhabhathi, njengezindlu, iinkampani, izibonelelo zokufundisa.Yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu kwaye inokwakha okuhle, okwenza inezatifikethi ezininzi.
Intambo yoVavanyo lwePole e-4 ngePlagi enye yoVavanyo kunye ne-RJ-12 yoBude bePlagi ye-1.5 yemitha
Le ntambo yokuvavanya i-Pole inePlagi enye yoVavanyo kunye ne-RJ-12 ye-plug ubude be-1.5 yeemitha isetyenziswa ngokubanzi kumacandelo eenkqubo zeekhabhathi ezicwangcisiweyo, ezinje ngezindlu, iinkampani, amaziko okufundisa.Yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu kwaye inokwakha okuhle, okwenza inezatifikethi ezininzi.
Oku kukucinywa kwesibini. LSA Cords ngeentambo iimodyuli, Kuba unqamko & nokutshintsha imodyuli, 2pole kunye 4pole.Tambo iintambo kunye uqinisa, clip banana for uvavanyo imodyuli 3M uvavanyo intambo imodyuli usifake ngqo ipere test olunye for 3M 10pair ngokukhawuleza uqhagamshele umnqongo. Sibonelela ngokunqanyulwa kwesibini ngaphezulu kweminyaka engama-20 njengenkampani evunyiweyo ye-ISO, ikhonkco elingaphezulu lenza inkqubo engqongqo yokuqinisekisa umgangatho, iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, UL njl.
I-Chaolian Electronic yenye yezobuchwephesha Izixhobo zeTelecom abavelisi kunye nabathengisi e China. Umzi mveliso wethu ubonelela ngoluhlu lwamaxabiso. I Izixhobo zeTelecom eveliswe ngumzi mveliso wethu yamkelwe kakuhle ngabathengi ngexabiso eliphantsi. Wamkelekile ukudibana.